Oovulindlela Emagqagaleni EOstreliya
FUNDA NGOLUNYE ULWIMI IPidgin yaseSolomon Islands ISepedi ISidama ISilozi ISpanish Intetho Yezandla YaseIndia Intetho Yezandla yaseOstreliya Isi-Ibanag Isi-Iceland Isi-Iloko Isi-Indonesia Isi-Isoko Isi-Itali IsiAlbania IsiAmharic IsiArabhu IsiArmenia IsiAymara IsiAzerbaijani IsiAzerbaijani (sesiCyrillic) IsiBashkir IsiBassa (saseCameroon) IsiBengali IsiBhulu IsiBicol IsiBoulou IsiBulgarian IsiCatalan IsiCebuano IsiChichewa IsiChitonga IsiChitonga (SaseMalawi) IsiChitumbuka IsiChiyao IsiChuvash IsiCibemba IsiCinyanja IsiCreole saseHaiti IsiCroatia IsiCzech IsiDangme IsiDanish IsiDatshi IsiDigor IsiDouala IsiEfik IsiEstonia IsiEwe IsiFiji IsiFinnish IsiFon IsiFrentshi IsiGa IsiGeorgia IsiGrike IsiGuarani IsiGujarati IsiGun IsiHausa IsiHebhere IsiHiligaynon IsiHindi IsiHiri Motu IsiHungary IsiJamani IsiJapan IsiJula IsiKabiye IsiKannada IsiKikamba IsiKikaonde IsiKikuyu IsiKiluba IsiKinyarwanda IsiKirghiz IsiKiribati IsiKirundi IsiKisonge IsiKongo IsiKorea IsiKurdish Kurmanji (SaseCaucasus) IsiKurdish Kurmanji (sesiCyrillic) IsiKwangali IsiKwanyama IsiLamba IsiLatvia IsiLingala IsiLithuania IsiLuganda IsiLunda IsiLuo IsiLuvale IsiMakedonia IsiMalagasy IsiMalay IsiMalayalam IsiMambwe-Lungu IsiMarathi IsiMaya IsiMbunda IsiMingrelian IsiMongolia IsiMoore IsiMotu IsiMyanmar IsiNdebele IsiNdebele (saseZimbabwe) IsiNdonga IsiNepali IsiNgesi IsiNigerian Pidgin IsiNorway IsiNzema IsiOkpe IsiOromo IsiOssetia IsiOtetela IsiPangasina IsiPapiamento (saseCuraçao) IsiPersi IsiPhuthukezi IsiPidgin (SaseCameroon) IsiPolish IsiPunjabi IsiQuechua (saseBolivia) IsiRashiya IsiRomania IsiSamoa IsiSango IsiSerbia IsiSerbian (saseRoman) IsiSesotho (South Africa) IsiShona IsiSinhala IsiSlovak IsiSlovenia IsiSranantongo IsiSuthu (Lesotho) IsiSwahili IsiSwahili (saseCongo) IsiSwati IsiSwedish IsiTagalog IsiTajiki IsiTamil IsiTatar IsiTelugu IsiTetun Dili IsiThai IsiTigrinya IsiTiv IsiTok Pisin IsiTongan IsiTshayina SaseMandarin (Esenziwe Lula) IsiTshayina SaseMandarin (Esiqhelekileyo) IsiTshiluba IsiTsonga IsiTswana IsiTurkish IsiTurkmen IsiTuvaluan IsiTwi IsiTzotzil IsiUkrainian IsiUrhobo IsiUzbek IsiVenda IsiVietnam IsiWaray-Waray IsiWelsh IsiWolaita IsiXhosa IsiYoruba IsiZande IsiZulu isi-Igbo isiKurdish Kurmanji isiZapotec (saseIsthmus)
Oovulindlela uGeorge Rollston noArthur Willis bamisile ukuze bagalele amanzi kwimoto yabo.—ENorthern Territory, ngo-1933
NGE-26 KAMATSHI 1937, amadoda amabini adinwe eyimfe angena eSydney, eOstreliya ethe chu ngemoto yawo emdaka. Ukususela oko emke kunyaka odlulileyo kweso sixeko, ahambe umgama ongaphezu kweekhilomitha eziyi-19 300 ukutyhutyha ezinye zendawo ezisemaphandleni nezingumqwebedu zelo lizwe. La madoda yayingengomadela-kufa okanye abakhenkethi. UArthur Willis noBill Newlands yayingoovulindlela ababini abakhutheleyo, ibe babezimisele ukushumayela iindaba ezilungileyo zoBukumkani BukaThixo kwimimandla esemagqagaleni yaseOstreliya.
Iqaqobana laBafundi BeBhayibhile * eOstreliya, ngamaxesha amaninzi, lalishumayela kwizixeko nakwiidolophu eziselunxwemeni kwada kwangasekupheleni kweminyaka yoo-1920. Imimandla esembindini isemagqagaleni kwaye ingumqwebedu, ibe ingaphezu kwesiqingatha seMerika ngobukhulu. Nangona kunjalo, abazalwana babesazi kakuhle ukuba abalandeli bakaYesu bamele banikele ubungqina ngaye “nakwezona nxalenye zikude zomhlaba,” kuquka nasemagqagaleni apho eOstreliya. (IZe.1:8) Kodwa babeza kuwenza njani umsebenzi omkhulu kangako? Babezimisele ukwenza konke okusemandleni abo, benokholo lokuba uYehova uza kuwusikelela umgudu wabo.
OOVULINDLELA BAQALISA UKUSHUMAYELA
Ngo-1929, amabandla aseQueensland naseNtshona yeOstreliya enza iiveni eziliqela ukuze akwazi ukufikelela imimandla ephakathi. Ezi veni zazisetyenziswa ngoovulindlela abakwaziyo ukuqhuba kwiimeko ezimbi nabakwaziyo ukuzilungisa. Baya kwiindawo ezininzi ekungazange kwashunyayelwa kuzo ngaphambili.
Oovulindlela ababengakwazi ukuba nazo babesiya ngeebhayisekile kwimimandla ethe qelele. Ngokomzekelo, ngo-1932 uBennett Brickell owayeneminyaka eyi-23, wathatha uhambo lweenyanga ezintlanu esiya kushumayela kwimimandla ekumntla welo lizwe, esuka eRockhampton eQueensland. Wayephethe impahla, ukutya, iingubo neencwadi ezininzi kulo bhayisekile. Xa amavili ebhayisekile agugayo, waqhubeka nohambo enethemba lokuba uYehova uya kumkhokela. Wayityhala ibhayisekile kangangeekhilomitha eziyi-320 kwindawo apho kwakukhe kwafa abantu ngenxa yokunxanwa. Kwiminyaka eyi-30, uMzalwan’ uBrickell wahamba iikhilomitha ezininzi etyhutyha lonke elo laseOstreliya ngebhayisekile, ngesithuthuthu nangemoto. Waqalisa ukushumayela kubantu boMthonyama yaye wancedisa ekusekeni amabandla amatsha, ibe wayesaziwa kwaye ehlonelwa kwezo ndawo.
IOstreliya yenye yeendawo ezinabantu abambalwa emhlabeni, ingakumbi kwiindawo zalapho ezisemagqagaleni. Nakuba kunjalo, abantu bakaYehova bazimisela ukufumana abantu nakwezona ndawo zisemagqagaleni.
UStuart Keltie noWilliam Torrington abangoovulindlela babezimisele ngeyona ndlela. Ngo-1933, banqumla kwiSimpson Desert, intlango eyayinesanti eninzi, besiya kushumayela kwidolophu iAlice Springs, ekumbindi welo lizwe. Xa bophukelwa yimoto kwafuneka bayishiye apho, waza uMzalwan’ uKeltie, owayenomlenze ofakelweyo, waqhubeka eshumayela ehamba ngenkamela! Ngenxa yokuba babezimisele, aba vulindlela bafumana imiphumo emihle xa badibana nomphathi wehotele eWilliam Creek, kwisiporo sikaloliwe. Lo mphathi wehotele, uCharles Bernhardt, kamva wayamkela inyaniso, wathengisa ihotele, waza waba nguvulindlela iminyaka eyi-15 eyedwa kwiindawo ezingumqwebedu nezisemagqagaleni zalapho eOstreliya.
UArthur Willis ulungiselela ukuya kushumayela emagqagaleni eOstreliya.​—EPerth, kwiNtshona yeOstreliya, ngo-1936
Oovulindlela bangaphambili kwakufuneka babe nesibindi bomelele ukuze boyise iingxaki ababa nazo. Kuhambo lwabo lokuya kushumayela emagqagaleni eOstreliya, uArthur Willis noBill Newlands, ekuthethwe ngabo ngaphambili, bahamba nzima kangangeeveki ezimbini iikhilomitha eziyi-32, kuba kwakuludaka nje kuloo ntlango ngenxa yezikhukula. Ngamanye amaxesha, bebile xhopho bubushushu babetyhala iveni ukuze iqabele kwiinduli zesanti, baze banqumle kwiintlambo ezinamatye. Xa bophukelwe yiveni, phofu yayisophuka qho, babehamba ngeenyawo okanye ngebhayisekile iintsuku eziliqela besiya kwidolophu ekufutshane, baze balinde iiveki kufike izinto zokuyilungisa. Nangona kwakukho loo mahla-ndinyuka, babengajongi ngemva. UArthur Willis, washwankathela amazwi akwimagazini ethi The Golden Age, ngelithi: “Kumangqina akhe akukho ndlela imbi okanye inde.”
UCharles Harris ekudala enguvulindlela wathi ukuba yedwa nokuva ubunzima emagqagaleni kwamnceda wasondela ngakumbi kuYehova. Wongeza ngelithi: “Kulunge gqitha ukuphila ubomi bakho unezinto eziphathekayo ezimbalwa kangangoko kunokwenzeka. Ukuba uYesu wayekulungele ukulala phandle xa kuyimfuneko, ngoko sifanele sikuvuyele ukwenza kanye oko ukuba isabelo sethu sifuna njalo.” Ibe yiloo nto kanye eyenziwa ngoovulindlela abaninzi. Ngenxa yokungadinwa kwabo, ngoku iindaba ezilungileyo zityhutyhe lonke ilizwe, kwaza kwancedwa abantu abangenakubaleka bakwazi ukumela uBukumkani BukaThixo.
^ isiqe. 4 Ngo-1931 aBafundi BeBhayibhile babizwa ngokuba ngamaNgqina KaYehova.​—Isa. 43:10.